October 11, 2019 - CeleLove
အလုပ်မှာ အခက်အခဲတစ်ခုခုနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာတိုင်း ရွတ်ဆိုရမည့် ဂါထာတော်
October 11, 2019 Cele Love 0
အလုပ်မှာ အခက်အခဲတစ်ခုခုနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာတိုင်း ရွတ်ဆိုရမည့် ဂါထာတော် ဘေး ရန်အပေါင်း ကို အောင်နိုင်စေမည့် “အောင်ခြင်းရှစ်ပါး” ဂါထာတော် ” မာရံ ယက္ခံ ဂဇံ စောရံ စိဉ္စမာနဉ္စ သစ္စကံ နာဂံ ဗကံ ဇိနော ဇိနိ ဟောတု မေ ဇယမင်္ဂလံ […]
ညဘက်တွေမှာ လွယ်လွယ်နဲ့ အိပ်မပျော်တဲ့သူတွေ ဒီလေ့ကျင့်ခန်း (၄) ခုကို လုပ်ပေးပါ …
ညဘက်တွေမှာ လွယ်လွယ်နဲ့ အိပ်မပျော်တဲ့သူတွေ ဒီလေ့ကျင့်ခန်း (၄) ခုကို လုပ်ပေးပါ … ညညဆိုအိပ်မပျော်ဖြစ်နေလား။ အိပ်မပျော်တာက ပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရပေမယ့် ရေရှည်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် တကယ့်ပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ညဘက်တွေမှာ အချိန်မှန်အိပ်ပျော်အောင် အိပ်ရာထဲမှာတင် ဒီယောဂလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ပေးလိုက်ပါ။ သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းစေပြီး ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်စေနိုင်ပါလိမ့်မယ် …။ #နည်းလမ်း(၁) ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို […]
ဖြိုးပြည်စုံတို့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်နှင့် သတင်းပေးတို့ကို ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးအရေးယူမည် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့က အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနဲ့ ထိန်းသိမ်းခံရပြီး သိမ်းဆည်းရမိ ဆေးပြားတွေဟာ မူးယစ်ဆေးဝါး မဟုတ်တာကြောင့် ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းကဲ့သို့ မှားယွင်း ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အတွက် ဝေဖန်မှုတွေရှိသလို၊ ဖမ်းဆီးစဉ်မှာ ရိုက်နှက်မှုတွေရှိတာကြောင့် ပြန်လည် တာဝန်ယူဖို့ […]
ဖူးစာရှင်ကို အိပ်မက်ထဲမှာ မြင်ဖူးချင်တဲ့အခါ ဒီနည်းလမ်း သုံးကြည့်ပါ….
ဖူးစာရှင်ကို အိပ်မက်ထဲမှာ မြင်ဖူးချင်တဲ့အခါ ဒီနည်းလမ်း သုံးကြည့်ပါ…. မိမိရဲ့ဖူးစာရှင်ကိုကြိုတင်တွေ့ဖူးချင်ကြတာဟာ လူတိုင်းပါပဲ…။ ဒါကြောင့် အိပ်မက်ထဲမှာ ဖူးစာရှင်ကိုတကယ်ပဲ မြင်ရမလားဆိုတာ သိရအောင် ကြားဖူးတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေ မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ် …။ ပထမဆုံးဗေဒင်ဆရာအချို့ပြောပြတဲ့နည်း လမ်းလေးကတော့ ဥတစ်လုံးကြက်သွန်ဖြူ သုံးလုံးကို ဆားရေနဲ့ပြုတ်ပေးရမယ်တဲ့။ ပြီးတဲ့ အခါ ကျက်သွားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူတွေကို […]
မျက်နှာပေါ်က မှဲ့ခြောက်၊ ဝက်ခြံ၊ တင်းတိတ် တွေကို အရှင်းပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်း
မျက်နှာပေါ်က မှဲ့ခြောက်၊ ဝက်ခြံ၊ တင်းတိတ် တွေကို အရှင်းပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်း မျက် နှာ ပေါ် က တင်း တိပ် ၊ ဝက် ခြံ ၊ မှဲ့ တွေ ကို အ ရှင်း ပျောက် ကင်း သွား […]
သီတင်းကျွတ်မှာ အဘွားဖြစ်သူကို သောင်းတန်အထပ်လိုက် ပိုက်ဆံပုံကြီးနဲ့ ကန်တော့လိုက်တဲ့ ဇေရဲထက် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မင်းသားချောလေး ဇေရဲထက် ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ …။ ဇေရဲထက်က သရုပ်ဆောင်ပီပြင်ပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုပိုင်နိုင်စွာသရုပ်ဆောင် နိုင်တာကြောင့် သူ့ကို ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ် …။ မိုမိုလေးပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒီတစ်ခါမှာတော့ […]
လာဘ်ပိတ်စေသော အကျင့်ဆိုးများ…… (၁) ဘုရားခန်းတွင် လင်မယား (၂)ယောက် မအိပ်ရ …။ (၂) ယောကျာ်း၏ ညာဘက်တွင် မိန်းမ မအိပ်ရ …။ (၃) နံနက် (၄) နာရီခွဲမှ (၆) နာရီအတွင်းတွင် သာသနာစောင့် နတ်မင်းကြီး (၄) ပါးတို့သည် လူအများစု၏ […]
မိမိအားအသေသတ်သူကို ဖမ်းမမိအောင် မေတ္တာပို့ပေးသောဆရာတော်ကြီး…..
မိမိအားအသေသတ်သူကို ဖမ်းမမိအောင် မေတ္တာပို့ပေးသောဆရာတော်ကြီး….. စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ငတရော်ရွာကျောင်းဆရာ တော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တဇဝနနှင့် သံဃာ၂ဝခန့်ကို နေ့ဆွမ်းကပ်ပြီး ဝါဆိုသင်္ကန်းများ ကပ်လှူခဲ့ပါတယ် …။ ဆရာတော်ကြီးဟာသက်တော်၉၁နှစ်ရှိပေမယ့် တရားတန်ခိုး မေတ္တာတန်ခိုးကြောင့်ပုံပါအတိုင်း နုပျိုသန်စွမ်းတော်မူပါတယ် ။ တစ်ရက် ဆွမ်းကပ် ငါးခုလောက် ပုံမှန်ရှိပါတယ် …။ ငါးချိန်လုံး ၁နာရီကျော်ခန့် ပရိတ်ရွတ်မေတ္တာပို့ပေးပါတယ် […]
ဒီနေရာ ၇ ခု မှာ တနေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူ ဆိုရင် လုံးဝ လက်လွှတ်မခံနဲ့နော်
ဒီနေရာ ၇ ခု မှာ တနေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူ ဆိုရင် လုံးဝ လက်လွှတ်မခံနဲ့နော် မှဲ့ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ အမျိုးမျိုး ရှိကြပါတယ်။ မှဲ့တစ်ခုစီ တိုင်းမှာ ဘဝနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ တစ်ခုစီ ရှိပါတယ် လို့ မှဲ့ပညာရှင်တွေက […]
လှိုင်​သာယာမှာ ၁၉နှစ်​ကောင်​မလေးက နေဇော်​ဦးကို မုဒိမ်းမှုနဲ့ အမှုဖွင့်​လိုက်​တဲ့ ဖြစ်​ရပ်​
လှိုင်​သာယာမှာ ၁၉နှစ်​ကောင်​မလေးက နေဇော်​ဦးကို မုဒိမ်းမှုနဲ့ အမှုဖွင့်​လိုက်​တဲ့ ဖြစ်​ရပ်​ အမှုဖြစ်စဉ်မှာ၁၁.၁၀.၂၀၁၉ရက် နေ့လည်၁၂နာရီ၂ဝအချိန်တွေင်​ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊လှိုင်သာယာမြို့မရဲစခန်းတွင် ဒုရဲမှုးစန်းယု တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် … မ……..(၁၉)နှစ်၊စက်ရုံဆင်း၊ …..အဆောင်၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေသူက ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သော(၅)ရက်နေ့ နေအိမ်အဆောင်အခန်းတွင်ဘယ်သူမှမရှိသဖြင့် မနေရဲသောကြောင့် အမှတ်(၁၉)ရပ်ကွက် သံသုမာ(၁)လမ်း၊ အိမ်အမှတ်( ၂၈၈/ခ)ရှိ အဒေါ်ဖြစ်သူဒေါ်……….၏နေအိမ်တွင် ခဏသွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ပြီး (၁၀.၁၀.၂၀၁၉)ရက်နေ့ […]